Inona no Remy Hair?
Ny volo volo dia volo izay misy ny kodiarana mifatotra amin'ny lalana iray ihany. Ny kutika dia môlekôkôpika matevina amin'ny haavon'ny volo. Rehefa mifamatotra amin'ny torolalana iray izy ireo, dia mihena ny fanangonana. Ny remy volo dia tena avo lenta.
Firy ny fandefasana? Hafiriana no mandefa entana?
Jereo ny Policy Shipping.
Firy ny volom-bolo no ilainao?"
Ny volontsika dia manodidina ny 3.5 oz amin'ny bundle (manome na mandray .2 oz) ka manoro izao manaraka izao:
Ho an'ny Perm Yaki, Coarse Yaki sy Kinky straight textures dia manoro izao manaraka izao
Halavan'ny sewin momba ny 1 - 1.5 bundles (miala ny antsasaky ny volonao)
Partial sewin mikasika ny 2-2.5 bundles (ny ampahany sy ny sisiny havia)
Full sewin momba ny 2.5 - 3.0 bundles (tsy misy volo mivoaka)
Full sewin miaraka amin'ny fanakatonana ny banga 2 sy ny fanakatonana
Raha mbola tsy azonao antoka ny habetsahanao azafady, azafady mba alefaso amin'ny mailaka miaraka amin'ny lahatsoratra, loko, ary fomba tianao halefanao ary hanampy anao.
Ho an'ny Curly, Kinky Curly & Coiffure dia manoro ity manaraka ity
Partial sewin momba ny 2.5 bundles (ny ampahany sy ny sisiny havia)
Ho an'ny endriky ny Afro Kinky dia manoro izao manaraka izao izahay
Ny antsasaky ny sewin momba ny 1 bundle (miala ny antsasaky ny volonao)
Partial sewin mikasika ny 1.5- 2.0 bundles (ny ampahany sy ny sisiny havia)
Full sewin momba ny 2.o - 2.5 bundles (tsy misy volo mivoaka)
*** Birao lava kokoa dia misy kofehy kely kokoa noho ireo loko 20 "na mihoatra iray fanampiny ny ampahany fanampiny amin'ny lisitra etsy ambony mba hahatratrarana ny haavony.
Ahoana no tsy ahitako ny safidy hifidy loko tiako?
Ny fampitomboantsika dia virjiny. Midika izany fa tsy loko volavola izy ireo amin'ny fomba rehetra hialana amin'ny fampiasana zavatra simika. Ny fanitarana rehetra dia hiditra ao amin'ny loko volom-bolo voajanahary izay mena mainty ho an'ny mainty mainty. Na izany aza dia mety handoto ny volonao amin'ny loko ilainao ianao.
Afaka manimba ve ny volom-borona?
Eny e! Tsarovy fa tena volo olona izany. Mitandrema rehefa malazo. Ny fanoloana ny volony dia mety hiteraka fahavoazana ara-pahasalamana eo amin'ny lamin-totozy. Jereo mandrakariva ny matihanina amin'ny fitsaboana loko rehetra. Na dia miteny aza isika fa ny volony dia mety ho miloko dia tsy manome antoka ny kalita aorian'ny fiovan'ny akora simika.
Afaka azoko afenina ve ity volo ity?
Ho an'ny Perm Yaki sy ny Kinky Hatraiza hatraiza, azonao atao ny manefa an'ity volon'ondry ity, Na izany aza anefa dia ho vita amin'ny vy izy fa tsy voaverina. Ity volo ity dia nokasihina natao mba hahatratrarana ny tarehiny 3c-4c tsara tarehy sy ny hafanana mahery dia mety hiteraka fihenam-bidy kely eo amin'ny sary. Mampiasà mpiaro iray hafanana raha misafidy ny hanisy vy miaraka amin'ny tontolon'ny soratra rehetra ianao.
Ahoana no iheverana ny volonao?
Ny volontsika dia refesina amin'ny toetrany lavalava avy eo amin'ny kodiarana mankany amin'ny faran'ny volo. Ny volo dia TSY mena amin'ny toetry ny volony.
Ny Kolikoly Perm Yaki dia marina ny halavany (tsy misy fitsangatsanganana)
Ny Coarse Yaki & Kinky Straight Collections dia hiaina momba ny 1 / 2 "amin'ny fampihenana (raha toa ka mandidy ny 16 ianao" mety ho 15.5 "noho ny sehatra kinky)
Ny tabilao fanangonana fihenam-bidy (jereo ny antsipiriany etsy ambany ho an'ny fihenam-bidy)
ny 10 "bundle = 5" - 6 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 12 "bundle = 6" -7 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 14 "bundle = 7" - 9 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 16 "bundle = 9" - 10 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 18 "bundle = 11" -12 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 20 "bundle = 13" -14 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 22 "bundle = 15" - 16 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 24 "bundle = 17" -18 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 26 "bundle = 19" -21 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 28 "bundle = 22" -23 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
Manana fihenam-bava be loatra ny tahiry Kinky Curly sy Coily (jereo ny antsipiriany etsy ambany amin'ny firoborobon'ny Coily sy Kinky)
ny 10 "bundle = 4" - 5 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 12 "bundle = 5" -6 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 14 "bundle = 6" - 7 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 16 "bundle = 8" - 9 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 18 "bundle = 10" -11 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 20 "bundle = 12" -13 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 22 "bundle = 14" - 15 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 24 "bundle = 16" -17 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 26 "bundle = 18" -20 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 28 "bundle = 20" -22 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
Afro Kinky dia mihena ny fihenan-dàlana (jereo ny antsipiriany etsy ambany momba ny fitombenan'ny AK)
ny 16 "bundle = 7" - 8 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 18 "bundle = 8" -9 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 20 "bundle = 9" -10 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 22 "bundle = 10" - 11 "tsy miseho (tombanana fotsiny izany)
ny 24 "bundle = 11" -12 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 26 "bundle = 13" -14 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
ny 28 "bundle = 14" -15 "dia tsy mitsahatra (tombanana fotsiny izany)
Akora inona no tokony hividianako?
Izahay dia mizara amin'ny antsipirihany amin'ny teboka tsirairay ao amin'ny famaritana vokatra, na dia mbola tsy azonao antoka aza fa ny tora-kofehy hanambatra ny volonao dia azonao atao ny mividy Samy soritra: Kitiho eto.
Haharitra hafiriana ny voloko?
Indrisy anefa fa tsy afaka manome fotoana voafaritra tsara hamaliana ity fanontaniana ity isika. Na izany aza, raha voakarakara tsara ny volo ary ny fitondrany dia afaka mampiasa indray ny volon'ny ankamaroan'ny mpanjifa. Ho an'ny fikojakojana mety sy fampahalalana bebe kokoa, tsidiho azafady Tabilao fitandremana.
Inona avy ny ora fiasanao?"
Ny formulas mailaka mailaka dia misy 24-7. Ny solontenany dia hamaly araka izay azo atao.
Inona ny politikanao miverina?
Jereo ny antsika politika famerenana.
Nahoana aho no tsy afaka mandoa vola amin'ny Internet?
Noho ny hosoka amin'ny aterineto sy ny lozam-pifamoivoizana dia manaiky ny fandoavam-bola avy amin'ny mpanjifa izay nanome adiresy voamarina. Raha toa ka tsy voamarina ny adiresy fandefasana / fandefasana anao na manana olana amin'ny fametrahana baiko dia antsoy amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny anaranao sy ny nomeraon-telefaoninao izahay ary hanome anao fomba fitsaboana hafa. Ny fomba fandoavam-bola hafa dia anisan'izany ny baikom-bola, ny sendikan'ny tandrefana, ny vola madinika, ary ny famindram-bola.
Manana programa maimaim-poana ve ianao?
Indrisy anefa fa tsy manitatra ny fiaraha-miasa amin'ny wholesale isika amin'izao fotoana izao. Na izany aza dia afaka miaraka aminay ianao Fandaharan'asan'ny masoivohon'ny afo!
Vanja milevina amin'ny kodiarana milina?
Ny tànana mifamatotra dia mihamangatsiaka. Meny fitetezana Fitaovana Pejy mirohy eto Novaina Handefa rakitra Pejy manokana Ny votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Élément Wikidata Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-pirenena hafa Ny lanjan'ny fiara tsy milamina raha tapipy ny tady mifamatotra amin'ny tanana. Ny Natural Hair Extensions Co. dia maniry ny hampiasa ny lozam-pifamoivoizana noho ny faharetany sy ny hateviny.